[TIP] Ampiasao ny Firefox hampiasa ny lohahevitry ny kisary ao amin'ny KDE | Avy amin'ny Linux
WretchedEgg | | Fisehoana / personalization, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Ity ny lahatsoratra voalohany navoakako, toro-hevitra kely izay afaka manampy anay hanatsara ny hatsaran'ny distro anay. Manantena aho fa tianao izany.
Tsy haiko raha mitranga amin'ny disto rehetra izay mampiasa izany KDE, saingy nanandrana aho, Firefox (sy Thunderbird) aza mampifandray velively amin'ny lohahevitra kisary ananantsika ary misafidy ny hampiasa ilay lohahevitra oksizenina (ny lohahevitra kisary KDE). Raha mitranga aminao ny zavatra toy izao dia tsy misy olana, dia mora be ny mamaha azy.
Isaky ny misintona lohahevitra kisary isika, dia misy rakitra antsoina hoe index.theme. Ao amin'ity fisie ity dia misy fika manokana izay hanaraka ny lohahevitra kisary ary azo ovaina amin'ny mpamoaka lahatsoratra.
Ny tsipika milaza fotsiny no hifantohantsika handova. Eo amin'ny tsipika handova ny lohahevitra kisary izay hakan'ny lohahevitra antsika ankehitriny ireo sary tsy hita dia tsy maintsy apetraka (hianjera indray).
Izany hoe, raha ohatra, tsy eo am-pelatanantsika ny sarin'ny Fampitana, ny lohahevitray dia hikaroka ny andalana Lova ary hampiasa ny kisary fandefasana ny lohahevitra voalohany hita.
Mba hanazavana ny fomba famahana ny olana dia hampiasa ohatra iray hafa aho amin'ny fampiasana ny lohahevitra Betelgeuse:
Lova = Faenza, KFaenza, oxygen, hicolor
Ohatra = fampirimana
Betelgeuse manondro Faenza y KFaenza voalohany, fa koa oxygen. Izao fotsiny no ataontsika:
Hamafa ny ôksizenina amin'ny lova isika.
Hamafa ny oksizenina amin'ny lovan'ny index.theme ao anatin'ny folder Faenza, KFaenza ary hicolor isika, raha apetrakao izy ireo. Hanao izany isika satria miasa toy ny kofehy Betelgeuse> KFaenza> oksizenina.
Averinay indray ny lohahevitra kisary.
Mamerina Firefox izahay.
Ary vonona, Firefox tokony hampiasa ny lohahevitra kisary safidintsika izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » [TIP] Ataovy izay hampiasa ny lohahevitry ny kisary ao amin'ny KDE i Firefox
Ahoana raha ny mifanohitra amin'izay no tadiaviko? Te hanana firefox tsy hampiasa ireo kisary gnome thema aho.
WretchedEgg dia hoy izy:
Ny fomba tsotra indrindra dia ny fametrahana ny iray amin'ireo lohahevitra marobe amin'ny tranokala Firefox.
Raha tsy izany dia heveriko fa tsy maintsy manova ny fikiranao Firefox ianao na mametraka plugin mety hahavita azy ho anao. Nahita fampianarana kely momba ny fanovana sary masina vitsivitsy aho, saingy tsy haiko raha miasa amin'ny Firefox amin'izao fotoana izao (ny lesona dia tamin'ny 2010): https://noctuido.wordpress.com/2010/04/16/firefox-cambiar-los-iconos-y-carpetas-de-los-marcadores/
Ao amin'ny freedesktop Icon Theme Spercification (http://standards.freedesktop.org/icon-theme-spec/icon-theme-spec-latest.html) Tsy nahita na inona na inona miresaka famerana fampiharana tsy hampiasana ny lohahevitra kisary aho.
Mamaly an'i WretchedEgg
ny hevitra dia natao ho an'i @ José Torres
Ny olana dia raha tsy misy kisary amin'ny rindranasa voafantina ny fampiharana iray dia hisy zavatra ratsy hiseho xD
Raha misy tsy hita ny kisary, dia nalaina tao amin'ny hicolor izy io, matetika apetraka ho fiankinan-doha rehefa mametraka Desktop Environment na application ianao.
Tsy azoko tamin-kitsimpo .. xD
Nijery tao amin'ilay fampirimana aho:
/ trano / na mi_usuario el /.kde/share/icons/elementary_usu/
ary ny hany ilazana ny fananana dia ity:
Anarana = fototra USU
Anarana [bg] = УУУ fanabeazana fototra
Fanehoan-kevitra = Lohahevitra maoderina malama, natao ho intuitive. Misy ampahany avy amin'ny lohahevitra kisary Elementary, Humanity, Tango, Gnome-Colors ary Oxygen.
Fanehoan-kevitra [bg] = Fanamarihana ambany pejy, sary sy lohateny hoe. Вкю Elementary, Humanity, Tango, Colour Gnome ary Oxygen.
Ahoana no fomba hanaovana izany amin'ity tranga ity?
Ary ny Firefox ve mampiasa ny lohahevitry ny sary masina anao sa ny an'ny oxygen?
Ampiasao ny lohahevitra kisary safidintsika.
ny fanontanianao @ Ghermain dia marina, marina?
eny amin'io fanontaniana io !!
Eny ary, na @federico na @Ghermain: raha toa ka asehon'ny Firefox ireo andiana kisary safidinao, inona no tianao ovaina? Tsy hanome soso-kevitra fotsiny aho ny hametrahana "hicolor" ao anatin'ny lovanao raha sanatria mila kisary ianao.
Lahatsoratra tsara dia tsara, fanontaniana iray: ahoana no ahitanao ny Firefox hifanaraka amin'ny tsanganana lohateny? Tsy nahomby tamin'ny fahazoako azy nanao izany tao amin'ny KDE. Ary zavatra iray hafa, inona ny lohahevitra GTK ampiasainao?
Ity ... ny marina dia tsy napetrako ny pikantsarin'ilay lahatsoratra (heveriko fa napetrak'i @elav ho ahy), ka tena tsy haiko ny manao azy, fa angamba amin'ny plugin Oxygen KDE: http://oxygenkde.altervista.org/index.html
Ary amin'ny olan'ny GTK, amin'ny Xfce dia mampiasa Greybird-Elme miaraka amina fanovana roa na telo aho.
Ubuntu ho an'ny takelaka